खाने ठाउँमा गन्ध आउँछ भने ग्राहक नखाएरै उठ्नुपर्छ | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / खाने ठाउँमा गन्ध आउँछ भने ग्राहक नखाएरै उठ्नुपर्छ
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता May 18, 2018	0 222 Views
दाङ देउखुरी होटल व्यवसायी समितीका अध्यक्ष
घो राहीमा हो टलको अवस्था कस्तो छ ?
पाच हजारदे खि पाच लाख हुदा करो डौ ंको लगानी भएका हो टलहरु छन् । स्वदे शी विदे शी अतिथिहरुलाई स् वागत गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । प्रदे श र के न्द्रस्तरका कार्यक्रम चले पनि हो टलको से वामा कमी छै न । विभिन्न दे शका ब्राण्डे ड परिकारहरु बनाएर खुवाउन सक्ने अवस्था छ ।
सरसफाइ कस्तो छ नि ?
ठूला हो टलमा पो शाकसहितका क्षमतावान कर्मचारी छन् । सिष्टमको विकास भएको छ । अर्डर अनुसारको खाना पकाउ“छन् । उनीहरुको किचन गो प्य र सुरक्षित छ । मझौ ला र साना हो टलमा के ही समस् या दे खिन्छ । कतिमा साहु आफै लागे का हुन्छन् । के हीमा न्यून तलवमा कामदार राखिएको छ । थो रै तलवमा काम गनेर् व्यक्ति राखे काहरुले पकाउदा कन्याउने , हात समयमा नधुने , त्यही हातले खाने कुरा समाते र ग्राहकलाई दिने समस्या छ । साहु पनि पकाउदै , खाने कुरा त्यही हातले दिदै र आउने जतिस“ग हात मिलाउदै गनेर् घिनलाग्ने बानी छ ।
यसको समाधान के हो नि ?
ढो काभित्र पस् दा फो हो र दे खे पछि ग्राहक फर्किनुप¥यो  । पै सा दिएर खाने ग्राहकले फो हो र कुरा खान्न भन्ने अधिकार छ । सचे त नभएर मात्रै त्यसो भन्न सके का छै नन् । दामो दरचो क आसपासमा के ही समस् या भे टिएको छ । बसपार्कमा पनि एक दुईटाले अटे र गरे का छन् । उनीहरुलाई सुधार गर्नुस् भनिरहे का छौ ं । म पनि हो टल–हो टलमा पुगे र साहुहरुलाई सरसफाइमा ध्यान दिनुस् भने को छु । कतिले ग्राहकले नदे खे को खा“दै नन् त्यसै ले खुला राखे को छु भन्छन् । उनीहरुलाई पनि नमूना दे खाउने सिसाभित्र राख्नुस् । अरु कुरा सुरक्षित राख्नुस् भने का छांै  ।
ग्राहकले सुधार्नुपनेर् कुरा के हो ?
हो टलमा पसिसके पछि कर्मचारीको अव्यवस् था, बस् ने ठाउ“ कस् तो छ ? हे र्नुपर्छ । बसी सके पछिको से वा कस् तो छ ? साहुले सबै स“ग हात मिलाउ“दै र खाने कुरा समाते र दिंदै गरे को छ, वे टरहरु फो हो री छन् । हात धुने वे शिन छै न । पिसाव गनेर् शौ चालय छै न । खाने ठाउ“ गन्ध आउ“छ भने ग्राहक नखाएरै उठ्नुपर्छ । त्यसरी हि“डे पछि सञ्चालकलाई चो ट पर्छ र सुधार हुन्छ । मलाई हतार छ तयार छ भने दिनुस् नत्र जान्छु भन्ने ग्राहक आउछन् । तिनलाई बासी, र बिग्रे को खानाको मतलब छै न । नाक मुख थुने र हिड्ने व्यक्तिले त्यही धुलो भित्रको जे री, समो सा, पुरी डो नट खाएको भे टिन्छ । आफूले खाने कुरामा विशे ष ध्यान दिनुप¥यो  ।
सञ्चालकले के गर्नुपर्ला ?
सामान्य ज्ञान नभएको व्यक्तिले हो टलमा हातै हाल्नु हुन्न । व्यवसाय रहरले गनेर् र जा“गरले चलाउनुपर्छ । एक ग्यालिन रक्सी, दुई हाप मासु, दुई तीन पिले ट मम, एक दुई क्वाटर रक्सी राखे र व्यवसाय चलाउन खो ज्नुहुन्न । पै सा हाले र खाना नास् ता गनेर् ग्राहकलाई घरको भन्दा राम्रो छ भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ । मै ले ठीक खाना खाएको छु भन्ने विश्वास भयो भने ग्राहकले खर्च गरे को चित्त दुखाउ“दै न । झिंगा माखा भन्के को , धुलो बसे को खुला खाने कुरा बे च्नु पाप हो  । ग्राहकलाई पूर्ण से वा दिने र त्यसको लाभ लिएर सफल व्यवसायी बन्ने चाहना नभएकाले हो टल शुरु नै गर्नुहुन्न ।
सफा र फो हो र हो टलको मूल्यमा फरक छ र ?
सरसफाइ गरी चिटिक्क पारे का हो टल र झुप्राहरुमा पस् नुस् दर एउटै पाउनुहुन्छ । नया परिकार बन्ने ठाउ“मा फरक पर्ला नत्र एउटै हो  । सिसा भएको , सफा टे बुल तथा भुइ भएका हो टलतिर आकर्षण बढ्न सके को छै न । यसको कारण सफामा मान्छे हरु महंगो हो ला भने र पस् नै डराउछन् । त्यो हट्नुपर्छ । बाहिरै बाट फो हो र दे खे र हो टलमा नपस्ने अवस्था आयो भने सबै ले सरसफाइ नगरी सुखै छै न । सरसफाइ गदैर् मा मूल्य बढी पदैर् न । पहिल्यै दे खि चल्दै आएको यही हो भन्ने मानसिकता छ । अब फे रिनुपर्छ । सफामा पस्नुपर्छ भन्ने चे तना जगाउनुपर्छ ।
अब के गनेर् ?
हामीले समितिको तर्फबाट संस् थागत पहल गछौर् ं । फो हो र सडे गले को बासी बे च्ने लाई छुट दिदै नांै  । गाउ“–गाउ“मा पनि सरसफाइका कुरा चले का छन् । मान्छे हरुले सिक्दै छन् । उपभो क्ता सतर्क हुनुपयो  । त्यसो भयो भने व्यवसायी बाध्य हुन्छन् । कि गतिलो से वा दिएर पे शा चलाउ“छन् कि त बन्द गरे र अरु काम गर्नतिर लाग्छन् । खाने कुरा बिक्दै बिके न भने अकोर् बाटो त खो ज्नुपयो । पै सा हाले र खाने हरु सचे त हुनुपर्छ । पै सा कमाउने ले इज्जत साथ कमाउनुपर्छ । एक पटक खाएर गएको ग्राहक फर्की आएन भने व्यवसाय चल्दै न । हरे क व्यक्तिले खाने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । खाने र खुवाउने दुबै को जिम्मे वारी हो  । खासमा सबै ले पहल गर्नुपर्छ । एक दुईजना व्यक्तिको समस् या हो इन । जसले खाए पनि फो हो रले असर गर्छ । सबै ले सफा बनाउ“, खाउ“, र आफ्नो क्षे त्र सुन्दर राखौ ं । त्यसमा सबै को कल्याण छ ।
Previous: शौचालयका दुई फरक दृश्य !
Next: शैक्षिक सुधारका लागि १५ बुदे प्रतिबद्धता